Ho An’ny Romanina 8:1-39
Manome fiainana sy fahafahana ny fanahy (1-11)
Ny fanahy no manaporofo fa zanak’Andriamanitra isika (12-17)
Miandry ny fanafahana ny zanak’Andriamanitra ny zavaboary (18-25)
‘Ny fanahy no miangavy ho antsika’ (26, 27)
Notendren’Andriamanitra mialoha izay nantsoiny (28-30)
Mivoaka ho mpandresy noho ny fitiavan’Andriamanitra (31-39)
8 Tsy melohina àry izay tafaray amin’i Kristy Jesosy. 2 Efa nanafaka+ anao tamin’ny lalàn’ny ota sy fahafatesana mantsy ny lalàn’ny fanahy. Io fanahy io no manome fiainana ho an’izay tafaray amin’i Kristy Jesosy. 3 Satria tsy lavorary ny olona,* dia izany no nahatonga ny Lalàna halemy,+ ka nisy zavatra tsy vitany.+ Izay tsy vitany anefa no nataon’Andriamanitra rehefa nirahiny ny Zanany+ ka nataony nitovy tamin’ny nofo mpanota,+ mba hanafoanana ny ota. Izany no nataony mba hanamelohana ny ota ao amin’ny nofo. 4 Dia ho afaka hanao an’izay zavatra tsara takin’ny* Lalàna isika+ amin’izay, ka tsy hanatanteraka ny fanirian’ny nofo, fa hanaiky hotarihin’ny fanahy.+ 5 Fa ny olona manatanteraka ny fanirian’ny nofo dia mampifantoka ny sainy amin’ny zavatry ny nofo,+ fa ny olona manaiky hotarihin’ny fanahy kosa mampifantoka ny sainy amin’ny zavatry ny fanahy.+ 6 Izay mampifantoka ny sainy amin’ny nofo dia fahafatesana no hiafarany,+ fa izay mampifantoka ny sainy amin’ny fanahy kosa hahazo fiainana sy fiadanana.+ 7 Fahavalon’Andriamanitra+ mantsy izay mampifantoka ny sainy amin’ny nofo. Fa sady tsy mankatò ny lalàn’Andriamanitra ny nofo, no tsy mahavita an’izany koa. 8 Tsy mahavita mampifaly an’Andriamanitra àry ny olona manatanteraka ny fanirian’ny nofo. 9 Tsy manatanteraka ny fanirian’ny nofo anefa ianareo, fa manaiky hiasan’ny fanahy,+ raha tena ao anatinareo ny fanahin’Andriamanitra. Fa raha misy tsy manana ny fanahin’i Kristy, dia tsy an’i Kristy izy. 10 Raha tafaray amin’i Kristy ianareo,+ na dia maty aza ny vatanareo satria mpanota, dia ny fanahy no hanome fiainana anareo satria olo-marina ianareo. 11 Raha ao anatinareo ny fanahin’ilay nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty, dia hamelona ny vatanareo mety maty+ koa ilay nanangana an’i Kristy Jesosy tamin’ny maty.+ Amin’ny alalan’ilay fanahiny ao anatinareo no hanaovany an’izany. 12 Tsy tokony havelantsika hifehy antsika àry ny fanirian’ny nofo, ry rahalahy, ary tsy tokony hotanterahintsika.+ 13 Tsy maintsy ho faty mantsy ianareo raha manatanteraka ny fanirian’ny nofo. Fa ho velona kosa ianareo raha vonoinareo+ amin’ny alalan’ny fanahy masina ny fanao ratsin’ny nofo.+ 14 Fa izay rehetra tarihin’ny fanahin’Andriamanitra no tena zanak’Andriamanitra.+ 15 Ilay fanahin’Andriamanitra miasa ao anatinareo dia tsy mahatonga anareo ho lasa andevo na hatahotra indray, fa mahatonga anareo hatsangana ho zanaka kosa. Noho io fanahy io àry, dia afaka miantso mafy isika hoe: “Aba,* Ray ô!”+ 16 Ny fanahin’Andriamanitra sy ny saintsika+ no miara-manaporofo fa zanak’Andriamanitra isika.+ 17 Raha zanaka àry isika, dia mpandova koa. Mpandova an’Andriamanitra tokoa isika, nefa koa mpiara-mandova+ amin’i Kristy. Raha miara-mijaly aminy+ isika, dia homem-boninahitra miaraka aminy koa.+ 18 Fa amiko dia tsy misy dikany ny fijaliana iaretantsika amin’izao fotoana izao, raha oharina amin’ilay voninahitra efa haharihary amin’ny alalantsika.+ 19 Efa tena tsy andrin’ny zavaboary mantsy izay hampiharihariana ny zanak’Andriamanitra.+ 20 Fa navela hanana fiainana tsy misy dikany ny zavaboary,+ nefa tsy noho ny sitrapony fa noho ny sitrapon’ilay namela an’izany hitranga. Mbola nisy an’izao fanantenana izao anefa: 21 Hafahana+ koa ny zavaboary ka tsy ho andevon’ny fahalòvana* intsony, fa hahazo an’ilay fahafahana miavaka* ananan’ny zanak’Andriamanitra. 22 Fantatsika mantsy fa mbola miara-mitaraina sy miara-mijaly foana ny zavaboary rehetra hatramin’izao. 23 Tsy izany ihany, fa mitaraina ao anatintsika ao+ koa isika na dia manana an’ilay voaloham-bokatra aza, dia ny fanahy. Miandry mafy koa isika mba hatsangan’Andriamanitra ho zanany,+ izany hoe mba hafahany amin’ny alalan’ny vidim-panavotana ny vatantsika. 24 Rehefa novonjen’Andriamanitra isika, dia lasa nanana an’izany fanantenana izany. Ny fanantenana zavatra efa hita anefa dia tsy fanantenana, fa ahoana no mbola anantenan’ny olona zavatra efa hitany? 25 Fa raha zavatra mbola tsy hitantsika+ no antenaintsika,+ dia miandry mafy an’ilay izy foana isika sady miaritra.+ 26 Hoatr’izany koa fa manampy antsika ny fanahy, rehefa malemy isika.+ Izao mantsy no olana: Mila mivavaka isika saingy tsy haintsika hoe inona no tokony hangatahina. Ny fanahy mihitsy anefa no miangavy ho antsika rehefa mitaraindraina ao am-pontsika ao* isika. 27 Fa fantatr’ilay mpandinika ny fo+ izay tian’ny fanahy holazaina, satria mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ilay fiangaviany ho an’ny olona masina. 28 Fantatsika fa ny zava-drehetra ataon’Andriamanitra dia ataony miara-miasa mba hahasoa an’izay tia azy, izany hoe izay nantsoiny mifanaraka amin’ny fikasany.+ 29 Efa hatramin’ny voalohany izy no nahafantatra an’izay hofidiny. Dia notendreny mialoha hanahaka an’ilay Zanany+ izy ireo, amin’izay io Zanany io no lasa lahimatoa+ amin’ny rahalahy maro.+ 30 Ankoatra izany, dia izay efa notendreny mialoha+ no nantsoiny,+ ary izay nantsoiny no nambarany hoe marina.+ Izay nambarany hoe marina kosa no nomeny voninahitra.+ 31 Inona àry no holazaintsika amin’izany? Raha manohana antsika Andriamanitra, dia iza no hahavita hanohitra antsika?+ 32 Ny Zanany aza tsy narovany fa nomeny mba hamonjena antsika rehetra.+ Dia tsy homeny antsika koa ve ny zavatra hafa rehetra ankoatra an’io Zanany io, noho Izy tsara fanahy? 33 Iza no hiampanga an’izay voafidin’Andriamanitra?+ Fa Andriamanitra no manambara azy ireo hoe marina.+ 34 Iza àry no hanameloka azy ireo? Tsy misy, satria i Kristy Jesosy ilay efa maty sady izy koa ilay efa natsangana tamin’ny maty sy eo ankavanan’Andriamanitra,+ ary ilay miangavy ho antsika.+ 35 Inona no hampisaraka antsika amin’i Kristy ka hahatonga azy tsy ho tia antsika intsony?+ Fahoriana ve, sa zava-tsarotra, sa fanenjehana, sa hanoanana, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra?+ 36 Araka ny voasoratra hoe: “Hoatran’ny hoe vonoina ho faty izahay isan’andro noho ny aminao; toy ny ondry hovonoina no fiheverana anay.”+ 37 Mivoaka ho mpandresy tanteraka+ anefa isika amin’izany rehetra izany, satria manampy antsika ilay tia antsika. 38 Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na fanjakana, na zavatra amin’izao fotoana izao, na zavatra ho avy, na hery,+ 39 na ny ambony, na ny ambany, na zavaboary hafa, dia tsy hisy hahavita hampisaraka antsika amin’Andriamanitra ka hahatonga azy tsy ho tia antsika intsony. Asehony amin’ny alalan’i Kristy Jesosy Tompontsika izany fitiavany izany.
^ Na: “Satria malemy ny nofo.”
^ Na: “fitsipika marina takin’ny.”
^ Teny hebreo na aramianina midika hoe “Ray ô!”
^ Izany hoe lo; simba.
^ Na: “be voninahitra.”
^ Na: “ao am-po tsy miloaka.”